किशोर नेपाल काठमाडौं, १३ माघ
देश अहिले निरन्तर बहसमा छ । पूरै समाज यस बहसमा होमिएको छ । अहिलेको यो बहसको कुनै छन्द छैन ।
मानिसहरूका आफ्ना मनमा लागेका कुरा त्यतिकै बड्बडाउने बानी हुन्छ । जनता बहसमा उत्रिए भने देशमा परिवर्तन आउँछ । अहिले समाजमा जस्तो अस्पष्ट बोली सुनिएको छ, त्यसले देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।
सरकारको नजरमा देश विकासको बाटोमा दगुरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री समृद्धिको एउटै कुरा पटक पटक दोहोर्‍याउने गर्छन् । उनी ऊर्जाका कुुरा गर्छन्, रेलका कुरा गर्छन् र नारायणी नदीमा चल्न थालेको खेलौना जस्तो पानी–जहाजका कुरा गर्छन् । उनलाई देशका नदी–नालामा दिनहुँ पानी घट्दै गएको थाहा छैन ।
प्रकृतिले कुन दिन कुपित भएर प्रहार गर्छिन्, प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको चिन्ता नै छैन । जो मानिस निष्पक्ष किसिमको सोचाइ राख्छन्, उनीहरूको भनाइ छ, प्रधानमन्त्रीले जेसुकै भनून्, देश त कुनै गतिमा कतै हिँडिरहेकै छैन । यो द्विविधाको दोबाटोमा टक्क अडिएको छ । देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यो स्पष्ट बहुमतको । त्यो बहुमत गनेर बसिरहेको छ सरकार ।
देशको अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादको नाममा, टेलिफोन कम्पनी एनसेलको टावरमा बम बिस्फोट गराउँदै हिँडेको छ । एनसेलका टावर भत्काइसकेपछि ऊ नेपाल टेलिकम र अरू कम्पनीको टावर पड्काउन थाल्छ । देशमा दोस्रो जनयुद्ध सुरु गर्न चाहन्छ यो पार्टी ।
उसको विचारमा पहिलो जनयुद्ध असफल भयो । अब अर्को जनयुद्ध नगरेसम्म कसरी देशको सत्तामा कब्जा जमाउन सकिन्छ ?
अहिले देशमा ‘एमसीसी’ चलेको छ । एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन । जान्नेहरू यो एमसीसीअन्तर्गत नेपालले पाउने ५० करोड डलरको अनुदान सहयोगले नेपालको समृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउनेछ । तर, अर्काथरी जान्नेहरू भन्छन्, ‘यसले नेपाललाई सदाका लागि अमेरिकाको दास बनाउनेछ । मुस्ताङ र मनाङका पाटनहरूमा अमेरिकी सेनाले कवाज खेल्नेछन् । नेपाल र चीनबीचको सुमधुर सम्बन्ध खलबलिनेछ । अमेरिकाको स्वार्थ तिब्बत हो । ऊ नेपालमा बसेर तिब्बतमा हस्तक्षेप गर्न र चीनलाई जिस्क्याउन चाहन्छ । नेपालको नालायक सरकार एनसेलसँग उठाउनुपर्ने ७३ अर्ब रुपैयाँ कर उठाउन सक्दैन । साम्राज्यवादी अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर देश बेच्न चाहन्छ ।’
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकार एमसीसीको विपक्षमा लागेका छैनन् । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावल र अरू पनि कतिपय नेताहरू एमसीसीको विरोधमा हतियारमा साँध लगाइरहेका छन् । भर्खरै मात्र, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले एमसीसीको विरोधमा मुख खोलेका छन् ।
तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले एमसीसीलाई नेपालको हितमा मिलाएर पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । यो पनि एक हिसाबको रमाइलो फण्डा बन्न पुगेको छ नेपाली राजनीतिमा ।
यता, चीनको कुरा बेग्लै छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले नेपालले एमसीसी अनुदान लिनेमा त्यति अडंगा लगाएकी छैनन् । उनले यो कुरामा चीनको सोचाइ प्रतिकूल नभएको बताएकी छन् ।
यतिबेला नेपालका नदीहरूमा चीनको मायाको निकै ठूलो बाढी आएको छ । चीनले रेलको बाटो केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने कुरा गरेको छ । त्यति मात्रै नभएर नेपालको विकासमा चीनले केही न केही गरिदिने आशा राखेका छन् नेपालका नेताहरूले ।
आफ्नो मित्र राष्ट्रको विकासका लागि चीनले पक्कै पनि केही गरिदेला । त्यसमा प्रतिवादको कुनै ठाउँ छैन । तर, नेपाल बीआरआईमा चीनको साथ भइसकेको छ । बीआरआई र एमसीसीमा फरक यति नै छ, एमसीसी अनुदान हो, बीआरआई ऋण । ऋण र अनुदानमा फरकहुनु स्वाभाविक हो । रह्यो कुरा एमसीसी इण्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग भन्ने । यसले कति नै फरक पार्नेछ र ? हामी कुनै न कुनै रणनीतिको अंग त बनेकै छौँ ।
साँच्चै भन्ने हो भने एमसीसी अनुदान अहिलेका लागि हाम्रो आवश्यकता हो । नेपालका धेरै क्षेत्रमा बिजुलीका ट्रान्समिसन लाइन छैनन् । सरकारले ऊर्जा जस्तो देशको आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिएको छैन ।
यसको अर्थ हो, एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि हाम्रा आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेछैनन् । त्यसैले कसैले पनि एमसीसीलाई दन्त्यकथा बनाएर यसको विरोध गर्नु भन्दा यसलाई स्वीकार गर्नु नै देशको हितमा हुनेछ । नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरूको कुराको पछाडि लाग्ने हो भने हामी कहिल्यै कहीँ पुग्ने सम्भावना छैन ।
विकास गफ गरेजस्तो सजिलो होइन । मानिसका इच्छा र आकाङ्क्षाले भन्दा पनि देशको आवश्यकताले विकासको निर्णय गर्छ । एमसीसीको नाममा जति विरोध गर्दा पनि फरक पर्दैन । किनभने, अहिले जति पनि तर्क गरिएका छन्, ती तर्क होइनन्, हाम्रा अज्ञान हुन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १३, २०७६, ०४:४८:००